Runway ကို ကမ်းခြေတစ်ခုသဖွယ် ပြောင်းလိုက်တဲ့ Chanel ရဲ့ SS19 Show
Runway ကို ကမ်းခြေတစ်ခုသဖွယ် ပြောင်းလိုက်တဲ့ Chanel ရဲ့SS19 Show
3 Oct 2018 . 2:18 PM
Chanel ဟာ Runway မှာ မရိုးနိုင်လောက်အောင် အမိုက်စားတင်ဆက်မှုတွေကို အမြဲ ယူဆောင်လာစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ Spring / Summer 2019 Fashion Week မှာဆိုရင် Karl Lagerfeld က Chanel အတွက် ပရိတ်သတ်တွေ အံ့အားသင့်လောက်တဲ့ နောက်ထပ် မျက်လှည့်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။
Chanel ဟာ Spring / Summer 2019 Fashion Week ရဲ့ Show ကျင်းပမယ့် Grand Palais ကို ပင်လယ်ကမ်းခြေလို ပုံစံပြောင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ တကယ့်ကမ်းခြေကို ရောက်နေသလားထင်ရအောင် သဲတွေ၊ on-duty lifeguard တွေနဲ့ Setting ဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Runway ဆိုပေမယ့် မော်ဒယ်လ်တွေက Heel စီးစရာမလိုဘဲ ခြေဗလာနဲ့ သဲတွေပေါ်ကနေ လမ်းလျှောက်သွားပြီး သူတို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ Chanel အိတ်တွေ၊ ဖိနပ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး လျှောက်ကြပါတယ်။
တကယ့်ကမ်းစပ်က ရေလှိုင်းတွေလာတဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် သေချာဖန်တီးပေးထားပြီးတော့ ကြည့်ရှုသူတွေက ကမ်းစပ်နားက ထိုင်ခုံတန်းတွေမှာ ထိုင်ရတာပါ။
Chanel ရဲ့ ဒီ Spring / Summer 2019 Fashion Runway မှာဆိုရင် Oversized နှီးဦးထုပ်တွေ၊ ခရီးသွားတဲ့အခါ အဆင်ပြေမယ့် Swimsuit တွေ၊ ရှေ့မှာ Chanel Logo ပါတဲ့ ခါးပတ်တွေကစလို့ Cardigan တွေ၊ Bathing Suit တွေပါ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Spring / Summer 2019 Collection မှာ Classic ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး နွေရာသီအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမယ့် ဖက်ရှင်အပိုင်းအစတွေကို ဖန်တီးထားပါတယ်။
Accessory ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ အိတ်တွေနဲ့ Sandal တွေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး Spring/Summer အတွက် အရောင်စုံစုံ ဦးစားပေးထားတာမြင်ရမှာပါ။ Chanel Logo ပါတဲ့ ဖိနပ်တွေ၊ အိတ်နှစ်လုံးကို တွဲရက်လွယ်ထားတဲ့ စတိုင်လ်တွေနဲ့ Jewelry ကို အထပ်ထပ် Layer လုပ်ဝတ်ထားတဲ့ စတိုင်လ်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Runway ကို ကမျးခွတေဈခုသဖှယျ ပွောငျးလိုကျတဲ့ Chanel ရဲ့SS19 Show
Chanel ဟာ Runway မှာ မရိုးနိုငျလောကျအောငျ အမိုကျစားတငျဆကျမှုတှကေို အမွဲ ယူဆောငျလာစမွဲဖွဈပါတယျ။ အခုလကျရှိ Spring / Summer 2019 Fashion Week မှာဆိုရငျ Karl Lagerfeld က Chanel အတှကျ ပရိတျသတျတှေ အံ့အားသငျ့လောကျတဲ့ နောကျထပျ မကျြလှညျ့တဈခုကို ဖနျတီးလိုကျပွနျပါပွီ။
Chanel ဟာ Spring / Summer 2019 Fashion Week ရဲ့ Show ကငျြးပမယျ့ Grand Palais ကို ပငျလယျကမျးခွလေို ပုံစံပွောငျးထားတာဖွဈပွီးတော့ တကယျ့ကမျးခွကေို ရောကျနသေလားထငျရအောငျ သဲတှေ၊ on-duty lifeguard တှနေဲ့ Setting ဖနျတီးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
Runway ဆိုပမေယျ့ မျောဒယျလျတှကေ Heel စီးစရာမလိုဘဲ ခွဗေလာနဲ့ သဲတှပေျေါကနေ လမျးလြှောကျသှားပွီး သူတို့ရဲ့ လကျထဲမှာ Chanel အိတျတှေ၊ ဖိနပျတှကေို ကိုငျဆောငျပွီး လြှောကျကွပါတယျ။
တကယျ့ကမျးစပျက ရလှေိုငျးတှလောတဲ့ ပုံစံဖွဈအောငျ သခြောဖနျတီးပေးထားပွီးတော့ ကွညျ့ရှုသူတှကေ ကမျးစပျနားက ထိုငျခုံတနျးတှမှော ထိုငျရတာပါ။S
Chanel ရဲ့ ဒီ Spring / Summer 2019 Fashion Runway မှာဆိုရငျ Oversized နှီးဦးထုပျတှေ၊ ခရီးသှားတဲ့အခါ အဆငျပွမေယျ့ Swimsuit တှေ၊ ရှမှေ့ာ Chanel Logo ပါတဲ့ ခါးပတျတှကေစလို့ Cardigan တှေ၊ Bathing Suit တှပေါ ပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
Spring / Summer 2019 Collection မှာ Classic ဖွဈတဲ့ ဖကျရှငျတှနေဲ့ ပေါငျးစပျထားတာဖွဈပွီး နှရောသီအတှကျပါ အဆငျပွစေမေယျ့ ဖကျရှငျအပိုငျးအစတှကေို ဖနျတီးထားပါတယျ။
Accessory ပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ အိတျတှနေဲ့ Sandal တှေ ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး Spring/Summer အတှကျ အရောငျစုံစုံ ဦးစားပေးထားတာမွငျရမှာပါ။ Chanel Logo ပါတဲ့ ဖိနပျတှေ၊ အိတျနှဈလုံးကို တှဲရကျလှယျထားတဲ့ စတိုငျလျတှနေဲ့ Jewelry ကို အထပျထပျ Layer လုပျဝတျထားတဲ့ စတိုငျလျတှကေလညျး ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
90s ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ကျအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ
တီရှပ်တွေနဲ့ချည်းပဲ နေရာတကာလိုက်ဖက်အောင် စတိုင်ဘယ်လိုထုတ်ကြမလဲ
အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် ဖက်ရှင်ကျအောင် ဘာတွေဝတ်မလဲ
ခံစားချက်တွေကို အရောင်တွေအသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြမလဲ
မိုးတွင်းအတွက် ဘာတွေချိန်းဖို့ လိုအပ်နေပြီလဲ သိရဲ့လား
by Moethae Say .4months ago